Madaxweynaha Soomaaliya oo dalbaday in laga Farxiyo carruurta danyarta ah ee aan maanta Ciidin – Kalfadhi
Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa hambalyo ku aadan dabaal dagga maalinta 1aad ee Ciidul Fidriga u diray dhamaan umadda Musliinta ah, gaar ahaan Shacabka Soomaaliyeed oo maanta intooda badan u dabaal dagaya 1-da bisha Shawaal.
“Waxaan ugu hambalyeeynayaa umadda Soomaaliyeed munaasabadaan barakeysan ee Ciidul Fidriga, Alle waxaan ka baryayaa inuu naga aqbalo soonkii iyo acmaashii wanaagsaneed, gaar ahaan intii lagu guda jiray bishii barakeysneed ee Ramadaan” ayuu yiri Madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo.
Madaxweynaha ayaa ugu baaqay Shacabka Soomaaliyeed ee wax heesta in ay ka qeyb qaataan Farxad gelinta Carruurta Soomaaliyeed ee ka soo jeeda qoysaska danyarta ah si ay uga mid noqdaan musliinta dabaa dagaysa maanta oo ah 1da bisha Shawaal.
“Gudd ahaan Shacabka Soomaaliyeed, gaar ahaan kuwa wax heesta waxaan ka dalbanayaa in ay ka qeyb qaataan Farxad gelinta Carruurta Soomaaliyeed ee aan wax heysan” ayuu yiri Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo.
Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa dalbaday in laga wada qeyb qaato sugidda amaanka magaalada Muqdisho islamarkaana ay shacabka Soomaaliyeed la shaqeeyaan Ciidamada amaanka Soomaaliya.
“Qof kasta oo Soomaaliyeed waxaan ka dalbanayaa in ay ka qeyb qaataan sugidda amniga islamarkaana ay la shaqeeyaan ciidamada amaanka” ayuu yiri Madaxweynaha Soomaaliya. “Ciidamada geesiyaasha ah ee habeen iyo maalin u taagan sugidda amniga waxaan leeyahay Hambalyo” ayuu yiri Maxamed Cabdullaahi Farmaajo.
Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa rajo wanaagsan ka muujiyay in sanadkaan kan xiga ay Soomaaliya ka bixi doonto dhibaatooyinka heeta isagoo ka dalbay in Shacabka Soomaaliyeed in dalka loo duceeyo Ciidamada amaankana lala shaqeeyo.
Dabaal dagyo waa wayn ayaa maanta ka dhacay gobalada Soomaaliya waxaana wadooyinka oo goobaha dalxiiska isugu soo baxay kumanaan Shacab Soomaaliyeed ah oo u badan Carruur iyo dumar.
Ciidamada Soomaaliya ayaa aad u adkeeyay amaaanka magaalada Muqdisho waxaana maanta isgoys walba taagan Ciidamo aad u qalabeysan. Sidoo kale Ciidamada Baanbeyda Soomaaliya ayaa maanta qeyb ka ah dabaal dagga 1da bisha Shawaal kuwaas oo socod ku maray wadooyin badan oo katirsan gobalka Banaadir.